Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Achọrọ ọgwụ mgbochi ọhụrụ nke Canada
Gọọmenti Canada gbalịsiri ike idobe ngalaba njem anyị, gụnyere ndị ọrụ na ndị njem na nchekwa na nchekwa. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ usoro nchebe kachasị mma megide COVID-19 na ụdị ya. Ọ bụ ya mere ndị ọrụ na ndị njem na ngalaba ikuku na ụgbọ oloko gọọmentị etiti ga-esi gbanarị ọgwụ mgbochi megide COVID-19.
Ihe achọrọ ga-amalite na Ọktoba 30
Dịka gọọmentị Canada kwupụtara na Ọgọst 13, ndị njem na ngalaba ikuku na ụgbọ oloko gọọmentị etiti ga-achọ ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID-19. Mgbe ọtụtụ ndụmọdụ gachara, Transport Canada nyere iwu na nduzi ikpeazụ nye ndị ụgbọ elu na ụgbọ okporo ígwè iji mejuputa a chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka ndị njem nke dị irè na 3 AM (EDT) October 30, 2021. Ihe ndị a chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi ga-emetụta ndị njem niile gbara afọ 12 gbakwunyere. onwa anọ ndi bu:
• Ndị njem ụgbọ elu na-efe n'ụgbọ elu ụlọ, transborder ma ọ bụ mba ofesi na-apụ na ọdụ ụgbọ elu ụfọdụ na Canada; na
• Ndị njem ụgbọ oloko n'ụgbọ okporo ígwè VIA Rail na Rocky Mountaineer.
Ndị njem ga-achọ igosi ndị ụgbọ elu na ụgbọ okporo ígwè akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Maka obere oge mgbanwe ruo Nọvemba 29, 2021, ndị njem nwere nhọrọ igosi akaebe nke nnwale molekul COVID-19 bara uru iji banye. Ụgbọ elu na ụgbọ oloko ga-ahụ maka ịkwado ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nke ndị njem. N'ụdị ụgbọ elu, Canadian Air Transport Security Authority (CATSA) ga-akwadokwa ndị ọrụ site n'ịkwado ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
A ga-enwe oke ole na ole maka ihe mberede yana ebe obibi pụrụ iche maka obodo ndị dịpụrụ adịpụ ka ndị bi na ya wee nwee ike ịga n'ihu na-enweta ọrụ ndị dị mkpa.
Ihe achọrọ ga-amalite na Nọvemba 30
Ruo Nọvemba 30, agaghịzi anabata ule molekul COVID-19 na-adịghị mma dị ka ihe ọzọ na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Ọ bụrụ na ndị njem amalitebeghị usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ma ọ bụ na ha ebidoghị ngwa ngwa, ha agaghị enwe ike ịga njem malite na Nọvemba 30. A ga-enwe naanị oke oke. A ga-enye ozi ndị ọzọ n'ime izu ndị na-abịa.
Tụkwasị na nke a, a ga-enwe usoro mgbanwe maka ndị mba ọzọ na-enweghị ọgwụ mgbochi bụ ndị na-ebikarị na mpụga Canada na ndị banyere Canada tupu October 30. Ruo February 28, ha ga-enwe ike iji ụgbọ elu maka nzube ịpụ Canada ma ọ bụrụ na ha gosipụtara ihe akaebe nke. nnwale molekul COVID-19 bara uru n'oge njem.
Gọọmenti Canada ga-aga n'ihu na-eso ndị isi ihe metụtara, ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ, ụgbọ elu na ụgbọ okporo ígwè, ndị na-ere ahịa, ụmụ amaala obodo, ndị ọchịchị obodo, na mpaghara na ókèala iji kwado mmejuputa a chọrọ ọgwụ mgbochi.